Home / समाचार / कतै मोवाइमा पोर्न फिल्म त देख्ने गर्नुभएको छैन ? सावधान मोवाइल ‘ह्याक’ हुनसक्छ
कतै मोवाइमा पोर्न फिल्म त देख्ने गर्नुभएको छैन ? सावधान मोवाइल ‘ह्याक’ हुनसक्छ 0
जसरी विश्व समुदाय डिजिटलाइज्ड हुँदै गयो त्यति नै बढि आफूलाई असुरक्षित पनि मान्न थालेको छ । आजभोलि स्मार्टफोन प्रयोग नगर्ने मानिस सायद पाउन मुस्किल छ । साथै यसको बेफाइदाको शिकार हुने पनि त्यत्तिकै छन् ।